एक रोजगार अनुबंध को लागी संक्रमण मुआवजा - Law & More B.V.
ब्लग » एक रोजगार अनुबंध को लागी संक्रमण मुआवजा: यो कसरी काम गर्दछ?
एक रोजगार अनुबंध को लागी संक्रमण मुआवजा: यो कसरी काम गर्दछ?
सेप्टेम्बर 7, 2021
केहि परिस्थितिहरु मा, एक कर्मचारी जसको रोजगार अनुबंध समाप्त हुन्छ कानूनी रूप मा निर्धारित क्षतिपूर्ति को हकदार छ। यो पनि संक्रमण भुक्तानी को रूप मा उल्लेख गरीएको छ, जुन अर्को काम वा सम्भावित प्रशिक्षण को लागी संक्रमण को सुविधा को लागी अभिप्रेरित छ। तर यो संक्रमण भुक्तानी को सन्दर्भ मा नियम के हो: जब कर्मचारी यो हकदार छ र कती संक्रमण भुक्तानी ठ्याक्कै छ? संक्रमण भुक्तानी (अस्थायी अनुबंध) को सम्बन्ध मा नियमहरु यस ब्लग मा क्रमिक चर्चा गरीरहेछन्।
संक्रमण भुक्तानी को अधिकार
कला अनुसार। 7: डच नागरिक संहिता को 673 अनुच्छेद 1, एक कर्मचारी एक संक्रमण भुक्तानी को हकदार छ, जो पनि गैर काम सम्बन्धी प्रयोजनों को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। कला। 7: 673 BW निर्दिष्ट गर्दछ जसमा एक नियोक्ता यो तिर्न बाध्य छ।
रोजगार सम्झौता को अन्त्य रोजगारदाता को पहल मा कर्मचारी को पहल मा
रद्द गरेर संक्रमण भुक्तानी को अधिकार अधिकार छैन*
विघटन द्वारा संक्रमण भुक्तानी को अधिकार अधिकार छैन*
जारी बिना कानून को संचालन द्वारा संक्रमण भुक्तानी को अधिकार अधिकार छैन *
* कर्मचारी मात्र एक संक्रमण भुक्तानी को हकदार छ यदि यो गम्भीर दोषी कार्यहरु वा नियोक्ता को तर्फ बाट चूक को परिणाम हो। यो मात्र यौन दुर्व्यवहार र नस्लवाद को रूप मा धेरै गम्भीर मामिलाहरुमा मामला हो।
केहि अवस्थामा, तथापि, एक नियोक्ता एक संक्रमण भुक्तानी notणी छैन। अपवाद हुन्:
कर्मचारी अठारह भन्दा कम छ र औसत मा बाह्र घण्टा भन्दा कम काम गरेको छ;
एक कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति उमेर मा पुग्यो संग रोजगार अनुबन्ध समाप्त भयो;
रोजगार अनुबंध को समाप्ति कर्मचारी द्वारा गम्भीर दोषी कार्यहरु को परिणाम हो;
नियोक्ता दिवालिया वा एक स्थगन मा घोषित गरिएको छ;
सामूहिक श्रम सम्झौताको शर्त छ कि एक संक्रमण भुक्तानी को सट्टा, तपाइँ एक प्रतिस्थापन प्रावधान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि बर्खास्तगी आर्थिक कारणहरु को लागी भयो। यो प्रतिस्थापन सुविधा पक्कै केहि शर्तहरु को अधीनमा छ।
संक्रमण भुक्तानी को राशि
संक्रमण भुक्तानी सेवा को प्रति वर्ष सकल मासिक तलब को १/३ को मात्रा (पहिलो काम दिन बाट)।
निम्न सूत्र सबै बाँकी दिनहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ, तर रोजगार को लागी पनि एक बर्ष भन्दा कम चलेको छ: (रोजगारी अनुबंध /सकल मासिक तलब को बाँकी भाग मा प्राप्त सकल तलब) x (१/३ सकल मासिक वेतन /१२) ।
संक्रमण भुक्तानी को सही मात्रा तलब र अवधि हो कि कर्मचारी नियोक्ता को लागी काम गरीएको छ मा निर्भर गर्दछ। जब यो मासिक तलब को लागी आउँछ, छुट्टी भत्ता र अन्य भत्ताहरु जस्तै बोनस र ओभरटाइम भत्ताहरु पनि जोड्नु पर्छ। जब यो काम को घण्टा को लागी आउँछ, एकै नियोक्ता संग कर्मचारी को लगातार अनुबंध पनि सेवा को वर्ष को संख्या को गणना मा जोडिनु पर्छ। एक क्रमिक नियोक्ता को अनुबंध, उदाहरण को लागी यदि कर्मचारी शुरू मा एक रोजगार एजेन्सी को माध्यम बाट नियोक्ता को लागी काम गरीयो, पनि जोडिएको हुनु पर्छ। यदि त्यहाँ कर्मचारी को दुई रोजगार अनुबंध को बीच मा6महिना भन्दा बढी को एक अन्तराल भएको छ, पुरानो अनुबंध अब सेवा भुक्तानी को गणना को लागी काम गरेको बर्ष को संख्या को गणना मा शामिल छैन। वर्ष बिरामी भएको छ कि कर्मचारी पनि सेवा को वर्ष को संख्या मा सामेल छन्। आखिर, यदि एक कर्मचारी ज्याला भुक्तानी संग एक लामो समय को लागी बिरामी भएको छ र नियोक्ता दुई बर्ष पछि उसलाई बर्खास्त, कर्मचारी अझै पनी एक संक्रमण भुक्तानी को हकदार छ।
अधिकतम संक्रमण भुक्तानी कि एक नियोक्ता तिर्नु पर्छ ,84,000 2021 (२०२१ मा) र वार्षिक रूपमा समायोजित हुन्छ। यदि कर्मचारी माथिको गणना विधि को आधार मा यो अधिकतम रकम भन्दा बढी छ, तेसैले उसले मात्र 84,000 2021 २०२० मा संक्रमण भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ।
१ जनवरी २०२० को रूपमा, यो अब लागू हुँदैन कि रोजगार अनुबंध कम्तीमा दुई बर्ष सम्म चलेको हुनु पर्छ संक्रमण भुक्तानी को अधिकार को लागी। २०२० देखि, प्रत्येक कर्मचारी, एक अस्थायी अनुबंध संग एक कर्मचारी सहित, पहिलो काम दिन बाट एक संक्रमण भुक्तानी को हकदार छ।
के तपाइँ एक कर्मचारी हुनुहुन्छ र के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ एक संक्रमण भुक्तानी को हकदार हुनुहुन्छ (र तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्नुभएको छैन)? वा तपाइँ एक नियोक्ता हुनुहुन्छ र तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको कर्मचारी लाई एक संक्रमण भुक्तानी तिर्न बाध्य हुनुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More टेलिफोन वा ईमेल द्वारा। रोजगार कानून को क्षेत्र मा हाम्रो विशेष र विशेषज्ञ वकीलहरु तपाइँलाई मद्दत गर्न खुसी छन्।
अघिल्लो पोस्ट गैर प्रतिस्पर्धा खंड: तपाइँ के जान्न आवश्यक छ?
अर्को पोस्ट वकिलले के गर्छ?